D-Bil TP ALP GGT - Chiropa KushandaⅡ Inokurumidza Reagent Kit-Pfungwa Yekutarisira Kuedza-Sinocare
Ropa Glucose Monitoring Series
Yakawanda-inoshanda Yekutarisa Matanho
Pfungwa yekutarisirwa Kuedzwa
Dhijitari Management Chishandiso Solution
Isiri-inoparadza Screening Zvigadzirwa
Chirwere cheshuga Peripheral Zvigadzirwa
SARS-CoV-2 Bvunzo Zvigadzirwa
D-Bil TP ALP GGT - Chiropa RinoshandaⅡ Rapid Reagent Kit
Nyore kushanda, zvakazara otomatiki
Hapana kudikanwa kwehunyanzvi mashandiro / calibration
[email inodzivirirwa] Iyo Direct Bilirubin / Yakazara Protein / Alkaline Phosphatase / Glutamyl Transferase Reagent Kit inoitirwa kuyera huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwe bilirubin (DB) uye yakazara protein (TP), uye chiitiko of alkaline phosphatase (ALP) uye γ-glutamyl transferase (GGT) muvanhu serum.
DB, inozivikanwawo seyakaunganidzwa bilirubin, inogadzirwa kana isina kunangana bilirubin inopinda muchiropa uye inosangana ne glucuronic acid pasi pekukanganisa glucuronyl transferase. Yakakwidziridzwa DB inoratidza kuti kune matambudziko ebilirubin kuburitswa kuburikidza biliary turakiti mushure mekubuda muchiropa.
Kliniki, yakakwidziridzwa TP uye yakadzikira TP zvese zvakakosha. Plasma yevasungwa nekuda kwekurasikirwa nemvura, kana kuwedzera kugadzirwa kweserum protein, kunogona kukonzera kuwanda kweproteinini kukwidza; kuderera kweprotein kwakazara kunogona kukonzerwa ne: kuwedzerwa kweplasma nekuda kwekuwedzera kwemvura, kushomeka kwezvikafu zvinovaka muviri kana kuwedzerwa kudyiwa, kushomeka kwekugadzira nekuda kwekukuvara kwechiropa, kana kurasikirwa kweakawanda eprotein yeplasma.
ALP inowanikwa mumhando dzakasiyana dzemaviri matunhu mumuviri wemunhu. Kuyerwa kweALP kunonyanya kushandiswa pakuongorora uye kuongorora kwezvirwere zvechiropa, hosha yezvirwere uye zvirwere zvine chekuita nemapfupa.
Iyo GGT iri serum inonyanya kubva pachiropa. Icho chiratidzo chinonzwisisika chechirwere chechiropa, sezvo yakakwira GGT inoonekwa muzvirwere zvechiropa zvezvikonzero zvakasiyana.
Liquid phase reaction system, uchishandisa yekupedzisira-poindi nzira & rate nzira nzira inotungamira kune chaicho mugumisiro
Mhedzisiro inowanikwa mune 13 maminetsi
Yega-ine & imwechete-yekushandisa katuriji
Nyore yekushanda, yakazara otomatiki, hapana chikonzero chehunyanzvi mashandiro / calibration
Kero: No.265 Guyuan Road Hi-tech Zone, Changsha, Hunan, China
Nhau & Dzidziso
musha / Media / Chirwere cheshuga / Download / Taura nesu
2001-2021 Sinocare AIl Kodzero Dzakachengetedzwa